चीन Enameled कास्ट फलाम हरियो / कालो teapot केतली कारखाना र निर्माताओं | Forrest
पानी भाँडाहरू र Kettles
एफडीए, LFGB, Sgs
भित्र इनामेल र बाहिर चित्रकारी
कास्ट फलामको केतली
पिउने पिटरहरू सेट
कास्ट फलामको हरियो / कालो टीपोट केतल
तपाईंको इनेमेल कास्ट फलाम सफा गर्दै
यू कुकवेयरलाई धुनु अघि चिसो हुन दिनुहोस्।
यू कुकवेयरको मूल उपस्थिति जोगाउन तातो साबुन पानीले हात धुनुहोस्।
यू कुकवेयर तुरुन्तै सुक्नुहोस्।
यू मात्र इनामेल नोक्सानीबाट बचाउनको लागि केवल प्लास्टिक वा नायलन स्क्रिंग प्याडहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
यू लगातार दागहरूको लागि, ककवेयरको भित्री भाग २ देखि hours घण्टा भिजाउनुहोस्
यू खानाको अवशेषहरूमा कुनै पकाइएको हटाउन, ककवेयरमा १ कप पानी र २ टेबल स्पून बेकिंग सोडाको मिश्रण उमाल्नुहोस्।
यू भाँडोको ढक्कनको माथि माथि नलगाउनुहोस्, यसको मतलब तामचीनी कोटिंगले एक अर्कालाई सीधा स्पर्श गर्न सक्दैन, त्यसले सतहमा स्क्र्याच निम्त्याउँछ।
A: सामान्यतया हाम्रो MOQ 500 पीसी हुन्छ। तर हामी तपाईंको परीक्षण अर्डर को लागी कम मात्रा स्वीकार गर्दछौं। कृपया हामीलाई कति टुक्राहरूको आवश्यकता छ हामीलाई बताउन नहिचकिचाउनुहोस्, हामी लागतको हिसाबले हिसाब गर्नेछौं, आशा छ कि तपाईंले हाम्रा उत्पादनहरूको गुणस्तर जाँच गरेपछि ठूला अर्डरहरू राख्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो सेवा थाहा पाउनुहुनेछ।
A: निश्चित। हामी प्राय: नि: शुल्क बाहिर निस्किने नमूना प्रदान गर्दछौं। तर अनुकूलन डिजाइनका लागि थोरै नमूना शुल्क। जब अर्डरहरू निश्चित मात्रामा हुन्छन् तब नमूनाहरूको शुल्क फिर्ता हुन्छ। हामी सामान्य रूपमा FEDEX, UPS, TNT वा DHL द्वारा नमूनाहरू पठाउछौं। यदि तपाईंसँग केरियर खाता छ भने, यो तपाईंको खाताको साथ शिप गर्न ठीक हुनेछ, यदि होईन भने, तपाईं हाम्रो प्यापललाई फ्रेट शुल्क तिर्न सक्नुहुनेछ, हामी हाम्रो खातामा जहाज गर्दछौं। यो पुग्न लगभग २--4 दिन लाग्छ।
प्रश्न: नमूना नेतृत्व समय कति लामो छ?
A: अवस्थित नमूनाहरूको लागि, यसलाई २- days दिन लाग्छ। तिनीहरू स्वतन्त्र छन्। यदि तपाईं आफ्नै डिजाइनहरू चाहनुहुन्छ भने, यो 7-7 दिन लाग्छ, तपाईं डिजाइनको अधीनमा तिनीहरूलाई नयाँ प्रिन्टिंग स्क्रिन चाहिन्छ कि आदि।
प्रश्न: उत्पादनको नेतृत्व समय कति हो?
A: यसले MOQ को लागी days० दिन लिन सक्दछ। हामीसँग ठूलो उत्पादन क्षमता छ, जसले ठूलो मात्राको लागि पनि चाँडो वितरण समय सुनिश्चित गर्न सक्दछ।
Q: यदि मलाई मेरो आफ्नै डिजाईन चाहिन्छ भने फाईलको कुन ढाँचा तपाईंलाई चाहिन्छ?
A: हामीसँग घरमा हाम्रो आफ्नै डिजाइनर छ। त्यसोभए तपाईं JPG, AI, cdr वा PDF, आदि उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईंको अन्तिम पुष्टिकरणको लागि प्राविधिकमा आधारित मोल्ड वा प्रिन्टि screen स्क्रिनको लागि थ्रीडी ड्राइंग बनाउँदछौं।
प्रश्न: कति रंगहरू उपलब्ध छन्?
A: हामी प्यानटोन मिलान प्रणालीको साथ रंगहरू मेल खान्छौं। त्यसोभए तपाई हामीलाई चाहिने प्यान्टोन र color कोड मात्र बताउन सक्नुहुन्छ। हामी रंगहरू मिल्नेछौं। वा हामी तपाईंलाई केहि लोकप्रिय रंगहरूको सिफारिस गर्दछौं।
Q: तपाईंसँग कस्तो प्रकारको प्रमाणपत्र हुन्छ?
प्रश्न: तपाईंको भुक्तानी अवधि के हो?
A: हाम्रो सामान्य भुक्तान अवधि TT 30% डिपोजिट हो हस्ताक्षर गरे पछि B / L को प्रतिलिपि विरूद्ध। हामी हेराईमा एलसी पनि स्वीकार्छौं।
१) कास्ट आयरन टीपोटको प्याकिंग:
-कुरियर द्वारा, जस्तै डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स,आदि। यो डूको ढोका हो, सामान्यतया Day-। दिन आईपुग्नु।
-हावा बाट हवाई पोर्टमा, सामान्यतया 5-7days आईपुग्नु।
-समुद्र द्वारा समुद्री बन्दरगाहमा, uaually १-30--30० दिन आईपुग्नु।
यदि तपाईंको डेलिभरी समय धेरै urgrnt छ भने, हामी तपाईंलाई कुरियर वा एयर द्वारा छनौट गर्न सल्लाह दिन्छौं।
यदि होईन भने हामी तपाईलाई समुद्रमार्फत सल्लाह दिन्छौं, यो एकदम सस्तो छ।
अलिसा चौ– 0086 15383019351
१.२24 घण्टा अनलाइन सेवा।
२. उत्तम पूर्व बिक्री र बिक्री पछि सेवा।
50. days० दिन पछि जम्मा ढुवानी प्राप्त भएपछि।
We. हामी तपाईका लागि राम्रो सेवा र कम मूल्यको साथ शपिंग कम्पनी छनौट गर्नेछौं।
अघिल्लो: जापानी इनामेल कास्ट फलामको टीपोट ०.8 एल
अर्को: ०.०L होलसेल यूरोफिनले अनुमोदित अनुकूलित रंग इनामेल टेत्सुबिन कास्ट फलामको केतली टीपोट
कास्ट फलाम तामचीनी कुकवेयर सेट
एफडीए, LFGB, यूरोफिनहरू ellipse Frying Pan W अनुमोदित ...
कास्ट फलाम वर्ग पाई बेकवेयर मोल्ड
जापानीज कास्ट फलामको टीपोट केतली
तातो बिक्री तामचीनी tetsubin चिनियाँ teapot कास्ट ...
घर भान्साको व्यास २cm सेमी राउन्ड कास्ट फलामको क्यास ...